Banky iraisam-pirenena – Afrika: tsara tantana ny orinasa iandraiketan’ny vehivavy | NewsMada
Banky iraisam-pirenena – Afrika: tsara tantana ny orinasa iandraiketan’ny vehivavy
Nankalazaina, ny 31 jolay 2020 teo, ny Andron’ny vehivavy aty Afrika, nilazalazan-dRtoa Diariétou Gaye, tale iray ao amin’ny Banky iraisam-pirenena aty Afrika, ny momba azy ireo. Nomarihiny fa ny kaontinanta afrikanina izao no ahitana vehivavy betsaka misafidy ny fandraharahana, saingy tsy fantatra loatra. Hitarina ny toeran’ny vehivavy mpandraharaha, hitovy laharana amin’ny lahy, hampisy fiovana aty Afrika. « Betsaka ny vahaolana tsotra sy mora ahitam-bokatra ka tokony hitarina hatrany hahitan’ny vehivavy sehatra malalaka eo amin’ny fandraharahana », hoy i Diariétou Gaye.
Iharan’ny fanavakavahana ny vehivavy aty Afrika, ohatra, eo amin’ny fahazoana famatsiam-bola. Araka ny fanadihadiana natao tamina firenena 10, manantombo mahazo famatsiam-bola ny orinasa tantanan’ny lehilahy no ho ny vehivavy. Tsara tantana kokoa anefa ireo orinasa iandraiketan’ny vehivavy ireo, na kely aza ny vola miasa ao aminy. Anisan’ny fanampiana ny vehivavy ny fahazoany mizaka mitovy ny fananam-badiny, toy ny any Rwanda.
Manana fahavononana mamerim-bola ny vehivavy, araka ny fanadihadiana nataon’ny Banky iraisam-pirenena any Etiopia. Ny ankamaroan’ireo vehivavy miasa tena any amin’io firenena io, tsy mahazo fampindramam-bola raha tsy iombonana amin’ny fikambanana misy azy. Nahazo fampindramam-bola manokana ny maro taorian’ny fanadihadiana sy ny fizahana ny vokatra azon’izy ireny. 40 % ny tombom-barotra azon’ny vehivavy nanaraka fiofanana mitazona orinasa madinika sy salantsalany (PME).
Mijanona eo amin’ny fihariana mahazatra ny maro, tsy noho ny tsy fahalalana na ny tsy fisian’ny vola hoenti-miasa fa noho ny tsy fahampiam-baovao. Tsy mahafantatra ny tontolo misy azy ny vehivavy, ohatra, ny karama tokony horaisina, eo koa ny fiarahamonina mifehy azy ireny aty Afrika. Betsaka ankehitriny ny firenena afrikanina mampirisika ny vehivavy manomboka amin’ny fahatanorany hiditra amin’ny fandraharahana mahazatra ny lehilahy.